ဘုန်းကံရှိသော မိန်းမများ(အမျိုးသမီးများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်) - CeleLove
June 5, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်ပညာပေး 0
အမျိုးသမီးများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် အစွန့်ပစ်ခံမိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျားဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ အပြစ်ရှာထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေ စွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမတချို့ ဘဝပျက်မတတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် …. . … အမှန်က ပျော်ရမှာပါ ….. ။
လက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ ….. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့်တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရ ခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ ပျော်သင့်ပါတယ် ….. ။
ဘုရင်ကြီးက သမီးတော်တို့ ဒီလိုနေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ သမီးအကြီး (၂)ယောက်က”ခမည်းတော် ကျေးဇူးကြောင့်….”လို့ အမြဲလျှောက်ပြီး အငယ်ဆုံးသမီးတော်ကတော့”သမီးတော်ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်” လို့လျှောက်သတဲ့ …. ။ တိုတိုပြောရရင်ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးပြီး အဆင်းရဲဆုံးလူနဲ့ပေးစားလွှတ်လိုက်တယ် တောစပ်မှာ ထင်းခုတ်ဖို့သွားတော့ ချောင်းတစ်ခု အကူးမှာ သူဆင်းရဲထင်းခုတ်သမားဟာ စိန်တွေတွေ့တော့ သူ့မိန်းမ အတွက်ဆော့ကစား ရအောင်ယူလာရာက မင်းသမီးက နေရာလိုက်ပြခိုင်းပြီး ခမည်းတော်ထံအပ်တော့ ခမည်းတော့်ဘဏ္ဍာဆိုရင် မီးသွေးတုန်းပဲဖြစ်နေလို့ သမီးတော့်ဥစ္စာ ဆိုမှ စိန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…ဒီတော့ ပြောချင်တာက မိန်းမတိုင်းမှာ သူ့ဘုန်းသူကံဆိုတာရှိတယ် …. ယောက်ကျားတစ်ယောက် ဘုန်းကံနိမ့်လာပြီဆိုရင် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းကံရှိမြဲရှိနေတယ်ဆိုရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီယောက်ကျားဟာ ဘုန်းကံရှိတဲ့ မိန်းမနားမှာ မနေနိုင်ပဲ စွန့်ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာလိမ့်မယ် ….. ဘဝမှာ ဒီမိန်းမကြောင့်သာ ဒီလိုနေထိုင် ဒီလိုစားသောက်ရပြီး ဒီလိုစည်းစိမ်နဲ့ အဆင်တပြေ နေရမယ့်ကံပါလာတယ် ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘဲ သူတို့တော်လို့ တတ်လွန်လွန်းလို့ချည်း ထင်တတ်ကြတယ်
အားပေးချင်တာက သတ္တိရှိကြပါ .. ရဲရဲသာလုပ်ပြပါ … မတွန့်ပါနဲ့ ….. မကြောက်ပါနဲ့ ….. ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ …. ကွဲကြည့်လိုက် ခွဲနေကြည့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ တိတ်တိတ်လေးအချိန်တခုသာပေး စောင့်ကြည့် နေလိုက်ပါ …. လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်လည်းကျေနပ်ဝမ်းသာရမယ့် အဖြေတစ်ခု ရမှာပါ …. ။
သိဉ္စည်းမင်းကြီး တောလိုက်ရာမှအပြန် သစ်ပင်ပေါ်တွင် ကောင်းခြင်းငါးဖြာ နှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမပျိုတစ်ဦးကို တွေ့သည်နှင့် မေးမြန်းရာ ဖခင်ကပေးစားသည့် ယောက်ျားကိုယူ၍ လိုက်ခဲ့စဉ် တောလမ်းတစ်နေရာ၌ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သဖန်းသီးများခူးစားနေရာ မိမိကဆာလှသဖြင့် တောင်းစားသော် စားလိုလျှင်ကိုယ်တိုင် ခူးစားဟု ဆိုလေသည် …. ။
သို့နှင့် ကိုယ်တိုင်တက်ခူးရာ ပြန်မဆင်းနိုင်အောင် သစ်ပင်အောက်ခြေတွင်ဆူးများဖြင့်ကာရံ၍ ထွက်ပြေးတော့သည်ဟူ၏ ….. မင်းကြီးလည်း ကောင်းခြင်းငါးဖြာနှင့် လှပတင့်တယ်သော် ထိုမိန်းမပျိုကို မိဖုရားခေါင်အဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့လေသည် ထို့နောက် မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားကြီးတို့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင်း တစ်နေရာ အရောက်တွင် မိဖုရားကြီးက ဣနြေ္ဒမဆည်နိုင်ဘဲ ခစ်ခနဲ ရယ်တော်မူသည်ကို မင်းကြီးမေးလျှင် ဤသို့ဖြေဧ။် ….. ။
ဘုရားနှမကို တောတွင်း၌ ပစ်ပြေးသွားသူသည် ယခုအခါ လမ်းခင်းနေရသည်ကို တွေ့လျှင် ဘုရားနှမကဲ့သို့ ဘုန်းကျက်သရေရှိသူကို ဤလူညံ့မဆောင်နိုင်ရှာ ဟုတွေးမိ၍ ရယ်မိကြောင်းပါ ဘုရား ….. မင်းကြီးက မယုံကြည်၍ ဘုရားလောင်း မဟော်သဓသုခမိန်ကို မေးရာ ဘုရားလောင်းက ဤသို့ရှင်းဧ။်။ ဤမိန်းမမြတ်ကို ယောက်ျားက စွန့်ပစ်သွားသည်ဟူသော စကားကို သားတော်ယုံ ကြည်ပါသည် …. ဘုန်းမဲ့သောသူသည် ဘုန်းရှိသောသူနှင့် အတူဆက်ဆံ၍မနေနိုင်ကြောင်းပါ ဘုရား” တည်းဟူဧ။်။
ထို့နည်းတူစွာ ဘုန်းကံမြင့်မားသော မိန်းမကောင်းတွေကို ညံ့ဖျင်းသိမ်နုပ်သော ယောက်ျားယုတ်က တန်ဖိုးကို နားမလည် သောကြောင့် စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေလျက် မိန်းကလေးဘက်က စွန့်​ခွာသွားအောင်လည်းကောင်း မိမိကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်၍သော်လည်းကောင်း သူတို့၏ ဘုန်းကံနိမ့်ပါးမှု့ အတိုင်း ဘဝကို ရွေးခြယ်ကြရ၏ ….. သို့ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏တန်ဖိုးကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူနှင့်သာလျှင် ကောင်းစွာ ထိုက်တန်ပါပေ၏ …. ။
တကယ်တော့ မိမိကို စွန်ပ့စ်သွားသူသည် မိမိ၏ဘုန်းကံအရှိန်ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်စိုးစဉ်းမျှ မရှိသင့် …. ။ သာလွန်မြင့်မြတ်သူနှင့် ဆုံဆည်းရမည့် မိမိကံကိုသာ တွေးတောဝမ်းသာသင့်တော့သည် မဟုတ်ပါလား ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားလို့ ဝမ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည်တစက်စက်နဲ့ ဘဝသေ လို ကျန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပြောချင်တာကသတ္တိရှိပါ ….. ။
ဘဝကို လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော်ပါ!သူများအားမကိုးပါနဲ့ တစ်နေ့ ကိုယ့်ဘုန်းကိုယ့်ကံနဲ့တန်တဲ့လူနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင် ကိုယ့်အခြေအနေတင့်တယ်လှပနေရမယ်လို့ ခံယူထားပါ ….. ပီးတော့ သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ပါ ….. စိတ်အေးချမ်းပါ …. ပျော်ရွှင်အောင်နေပါ …. လှပမှုရှိနေပါက မောင်ကြီးမခွာနိုင် ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ …. ။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျခှနျအားဖွဈစသေောပိုဈ့လေးတဈပုဒျ အစှနျ့ပဈခံမိနျးမသားတို့၏ ဘုနျးကံဆိုတာ ယောကျြားဖွဈသူကထားခဲ့လို့ဖွဈစေ ခဈြသူကထားခဲ့လို့ ဖွဈစေ အငယျအနှောငျးယူသှားလို့ဖွဈစေ အပွဈရှာထှကျခှာလို့ဖွဈစေ စှနျ့ပဈခဲ့ရငျ မိနျးမတခြို့ ဘဝပကျြမတတျ ဖွဈတတျကွပါတယျ …. . … အမှနျက ပြျောရမှာပါ ….. ။
လကျခုပျတီးပွီးကို ကနြေပျဝမျးမွောကျစှာပြျောနရေမှာပါ ….. ကိုယျငယျရှယျကနျြးမာတုနျး သနျစှမျးနတေုနျး ရှာဖှနေိုငျတုနျးမှာ သိလိုကျရတဲ့ အတှကျ ကိုယျ့တနျဖိုး နားမလညျတဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနပွေီး အဓိပ်ပါယျမဲ့ ဖွတျသနျးရ ခွငျးထကျ နှောငျ့ဖှဲ့ခွငျးမဲ့စှာ ဘဝကိုလှတျလပျစှာ တညျဆောကျရခွငျးက ပိုကောငျးတယျဆိုတာကို နားလညျခဲ့ရငျ ဒီမိနျးမဟာ ပြျောသငျ့ပါတယျ ….. ။
ဘုရငျကွီးက သမီးတျောတို့ ဒီလိုနနေရေတာ ဘာကွောငျ့လဲလို့ မေးတဲ့အခါ သမီးအကွီး (၂)ယောကျက”ခမညျးတျော ကြေးဇူးကွောငျ့….”လို့ အမွဲလြှောကျပွီး အငယျဆုံးသမီးတျောကတော့”သမီးတျောရဲ့ဘုနျးကံကွောငျ့” လို့လြှောကျသတဲ့ …. ။ တိုတိုပွောရရငျဘုရငျကွီးကစိတျဆိုးပွီး အဆငျးရဲဆုံးလူနဲ့ပေးစားလှတျလိုကျတယျ တောစပျမှာ ထငျးခုတျဖို့သှားတော့ ခြောငျးတဈခု အကူးမှာ သူဆငျးရဲထငျးခုတျသမားဟာ စိနျတှတှေတေ့ော့ သူ့မိနျးမ အတှကျဆော့ကစား ရအောငျယူလာရာက မငျးသမီးက နရောလိုကျပွခိုငျးပွီး ခမညျးတျောထံအပျတော့ ခမညျးတေျာ့ဘဏ်ဍာဆိုရငျ မီးသှေးတုနျးပဲဖွဈနလေို့ သမီးတေျာ့ဥစ်စာ ဆိုမှ စိနျပွနျဖွဈပါတယျ။
ကဲ…ဒီတော့ ပွောခငျြတာက မိနျးမတိုငျးမှာ သူ့ဘုနျးသူကံဆိုတာရှိတယျ …. ယောကျကြားတဈယောကျ ဘုနျးကံနိမျ့လာပွီဆိုရငျ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ဘုနျးကံရှိမွဲရှိနတေယျဆိုရငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပျေါလာပွီးအဲ့ဒီယောကျကြားဟာ ဘုနျးကံရှိတဲ့ မိနျးမနားမှာ မနနေိုငျပဲ စှနျ့ပွေးခငျြစိတျ ပေါကျလာလိမျ့မယျ ….. ဘဝမှာ ဒီမိနျးမကွောငျ့သာ ဒီလိုနထေိုငျ ဒီလိုစားသောကျရပွီး ဒီလိုစညျးစိမျနဲ့ အဆငျတပွေ နရေမယျ့ကံပါလာတယျ ဆိုတာ သူတို့မသိကွဘဲ သူတို့တျောလို့ တတျလှနျလှနျးလို့ခညျြး ထငျတတျကွတယျ
အားပေးခငျြတာက သတ်တိရှိကွပါ .. ရဲရဲသာလုပျပွပါ … မတှနျ့ပါနဲ့ ….. မကွောကျပါနဲ့ ….. ဝမျးမနညျးပါနဲ့ …. ကှဲကွညျ့လိုကျ ခှဲနကွေညျ့လိုကျရငျ ဘာဖွဈမလဲ တိတျတိတျလေးအခြိနျတခုသာပေး စောငျ့ကွညျ့ နလေိုကျပါ …. လူတိုငျးလကျခံနိုငျတဲ့ ကိုယျလညျးကနြေပျဝမျးသာရမယျ့ အဖွတေဈခု ရမှာပါ …. ။
သိဉ်စညျးမငျးကွီး တောလိုကျရာမှအပွနျ သဈပငျပျေါတှငျ ကောငျးခွငျးငါးဖွာ နှငျ့ပွညျ့စုံသော မိနျးမပြိုတဈဦးကို တှသေ့ညျနှငျ့ မေးမွနျးရာ ဖခငျကပေးစားသညျ့ ယောကျြားကိုယူ၍ လိုကျခဲ့စဉျ တောလမျးတဈနရော၌ ခငျပှနျးဖွဈသူက သဖနျးသီးမြားခူးစားနရော မိမိကဆာလှသဖွငျ့ တောငျးစားသျော စားလိုလြှငျကိုယျတိုငျ ခူးစားဟု ဆိုလသေညျ …. ။
သို့နှငျ့ ကိုယျတိုငျတကျခူးရာ ပွနျမဆငျးနိုငျအောငျ သဈပငျအောကျခွတှေငျဆူးမြားဖွငျ့ကာရံ၍ ထှကျပွေးတော့သညျဟူ၏ ….. မငျးကွီးလညျး ကောငျးခွငျးငါးဖွာနှငျ့ လှပတငျ့တယျသျော ထိုမိနျးမပြိုကို မိဖုရားခေါငျအဖွဈ တငျမွှောကျခဲ့လသေညျ ထို့နောကျ မငျးကွီးနှငျ့ မိဖုရားကွီးတို့ တိုငျးခနျးလှညျ့လညျရငျး တဈနရော အရောကျတှငျ မိဖုရားကွီးက ဣန်ဒွမေဆညျနိုငျဘဲ ခဈခနဲ ရယျတျောမူသညျကို မငျးကွီးမေးလြှငျ ဤသို့ဖွဧေ။ျ ….. ။
ဘုရားနှမကို တောတှငျး၌ ပဈပွေးသှားသူသညျ ယခုအခါ လမျးခငျးနရေသညျကို တှလြေှ့ငျ ဘုရားနှမကဲ့သို့ ဘုနျးကကျြသရရှေိသူကို ဤလူညံ့မဆောငျနိုငျရှာ ဟုတှေးမိ၍ ရယျမိကွောငျးပါ ဘုရား ….. မငျးကွီးက မယုံကွညျ၍ ဘုရားလောငျး မဟျောသဓသုခမိနျကို မေးရာ ဘုရားလောငျးက ဤသို့ရှငျးဧ။ျ။ ဤမိနျးမမွတျကို ယောကျြားက စှနျ့ပဈသှားသညျဟူသော စကားကို သားတျောယုံ ကွညျပါသညျ …. ဘုနျးမဲ့သောသူသညျ ဘုနျးရှိသောသူနှငျ့ အတူဆကျဆံ၍မနနေိုငျကွောငျးပါ ဘုရား” တညျးဟူဧ။ျ။
ထို့နညျးတူစှာ ဘုနျးကံမွငျ့မားသော မိနျးမကောငျးတှကေို ညံ့ဖငျြးသိမျနုပျသော ယောကျြားယုတျက တနျဖိုးကို နားမလညျ သောကွောငျ့ စိတျ၏ဆငျးရဲခွငျး ကိုယျ၏ဆငျးရဲခွငျးတို့ကို ဖွဈစလေကျြ မိနျးကလေးဘကျက စှနျ့​ခှာသှားအောငျလညျးကောငျး မိမိကိုယျတိုငျ စှနျ့ပဈ၍သျောလညျးကောငျး သူတို့၏ ဘုနျးကံနိမျ့ပါးမှု့ အတိုငျး ဘဝကို ရှေးခွယျကွရ၏ ….. သို့ဖွဈရာ အမြိုးသမီးတို့သညျ မိမိတို့၏တနျဖိုးကို ကောငျးစှာသိရှိနားလညျပွီး တနျဖိုးထားတတျသူနှငျ့သာလြှငျ ကောငျးစှာ ထိုကျတနျပါပေ၏ …. ။
တကယျတော့ မိမိကို စှနျပ့ဈသှားသူသညျ မိမိ၏ဘုနျးကံအရှိနျကို မလှမျးမိုးနိုငျတဲ့ ခပျညံ့ညံ့လူသာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဝမျးနညျးဖှယျစိုးစဉျးမြှ မရှိသငျ့ …. ။ သာလှနျမွငျ့မွတျသူနှငျ့ ဆုံဆညျးရမညျ့ မိမိကံကိုသာ တှေးတောဝမျးသာသငျ့တော့သညျ မဟုတျပါလား ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုစှနျ့ခှာသှားလို့ ဝမျးနညျးပကျလကျ မကျြရညျတစကျစကျနဲ့ ဘဝသေ လို ကနျြခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ပွောခငျြတာကသတ်တိရှိပါ ….. ။
ဘဝကို လကျတှကေ့ကြအြကောငျအထညျဖျောပါ!သူမြားအားမကိုးပါနဲ့ တဈနေ့ ကိုယျ့ဘုနျးကိုယျ့ကံနဲ့တနျတဲ့လူနဲ့ကွုံလာခဲ့ရငျ ကိုယျ့အခွအေနတေငျ့တယျလှပနရေမယျလို့ ခံယူထားပါ ….. ပီးတော့ သနျ့ရှငျးစှာနထေိုငျပါ ….. စိတျအေးခမျြးပါ …. ပြျောရှငျအောငျနပေါ …. လှပမှုရှိနပေါက မောငျကွီးမခှာနိုငျ ဖွဈနမှော အသအေခြာပါပဲ …. ။